Amakhandlela Abomvu Othandazela
ngu admin ngo 20-05-11
Ngaphambi kokukhanyisa ikhandlela lakho elibomvu ukuthandaza, kuyasiza ukukhetha indawo nesikhathi ongakhuleka kuso ngaphandle kokuphazamiseka. Ungabhekisisa imithandazo yakho kuNkulunkulu, ku-Uriel, nakwezinye izingelosi ezibomvu zokukhanya lapho ufuna ukuhlakanipha okudingayo. Thandaza ukuze ukwazi ukuthola, ukuthuthukisa, kanye ...
Njengoba manje siletha umlilo kule khandlela lekhandlela, silwenze sikhanye ngokukhanyayo, kwangathi singaletha nomlilo wothando, kulesi sikhathi sokukhuleka nokukhuleka.manje leli khandlela elingcwele lithumela imisebe yokudansa, njengokuphuma kwelanga ekuseni ekhazimula kakhulu, futhi kwangathi le misebe yokukhanya ingasihaqa nalabo esibathandayo. Sikunikeza ...
Ngiyikhandlela elincane le-apula, livela kwaHebei Seawell I / E Co, Ltd. Isithwathwa, sigqoke isipho ebomvu sikaSanta Claus ngephupho nenjabulo ye-creep. I-tonal ebomvu nemhlophe, isibani sikaKhisimusi okhazimulayo, umuntu ake azizwe eyingqayizivele yothando futhi imnandi, kuwuphawu lokuthula nenjabulo; Setha i-appl ebomvu ...
Amakhandlela eSanta Claus Tree
Entshonalanga, noma ngabe kungamaKhrestu, ngoKhisimusi ukulungiselela isihlahla sikaKhisimusi, ukuze kwandiswe injabulo yesimo somkhosi. Isihlahla sikaKhisimusi sisenziwa senziwa, isihlahla sama-fir cypress esihlala siluhlaza njengesibonakaliso sokuphila kuze kube phakade. Umuthi ohlotshiswe ngazo zonke izinhlobo zamalambu, ahlotshisiwe, a ...
Amakhandlela kaSanta Claus
USanta Claus uzinikele ezinganeni ezinhle ngoKhisimusi ka-Eva eziveza izibalo ezingaqondakali. Inganekwane njalo ebusuku ngoDisemba 24, indoda engaqondakali yayihamba nge-12 isliphu edonswa yi-reindeer, iminyango nomnyango isuka esitimeleni ingena endlini, bese isifaka ngasese isipho esitobhini sezingane zazo ...
Amakhandlela wosuku lokuzalwa
EGrisi yasendulo, abantu bakhonza unkulunkulukazi wenyanga u-Artemis. Emgubhweni wakhe waminyaka yonke wokuzalwa, Abantu bahlala bafuna ukufaka i-altare lesinkwa sezinyosi kanye nokwenza okuningi komoya okhanyayo wekhandlela, ukuze bakhombise ukukhumbula kwabo unkulunkulukazi wenyanga. Kamuva, nendima ...
Kwake kwenzeka isikhashana, kwaba nenkosi yathuthela ekhaya elisha. Uthenge amalambu amaningi namakhandlela. Master cabanga isibani liyaphawuleka, nokho inkosi isibani egumbini lokuhlala, ubeke ikhandlela ekhoneni elincane. Khanyisa ukuzibona usizi lobuhlungu, ngakho-ke ngithi kukhandlela: “ikhandlela nekhandlela, yebo ...
amakhandlela okuvota okuvinjelwe, ikhandlela le-beewax, ikhandlela lokuvota, ikhandlela elihlanzekile, ikhandlela lezinyosi, ikhandlela lensika yesinyosi,